Waya netting na hexagonal oghere awade ezi ventilashion na fencing ojiji. Hexagonal waya netting ka nke na-agbagọkwa carbon ígwè waya, electro ma ọ bụ na-ekpo ọkụ tinye galvanized, mgbe ahụ, plastic ntekwasa, ma ọ bụ doo. Ọ nwere ike chepụtara n'ime gabions igbe - otu n'ime ndị kasị ewu ewu waya ngwaahịa maka iju mmiri akara. Mgbe nkume na-etinye n'ime ya. Ịtọ nke gabions ka a mgbidi ma ọ bụ akụ megide mmiri na iju mmiri. Hexagonal waya netting na-welded n'ime okuko netting maka ozuzu nke ọkụkọ na ndị ọzọ na ọkụkọ ....
Min.Order ibu: 200 Roll / apụta
Tụkwasịnụ Ikike: 3000 Roll / apụta kwa ọnwa
Waya netting na hexagonal oghere awade ezi ventilashion na fencing ojiji. Hexagonal waya netting ka nke na-agbagọkwa carbon ígwè waya, electro ma ọ bụ na-ekpo ọkụ tinye galvanized, mgbe ahụ, plastic ntekwasa, ma ọ bụ doo.
Ọ nwere ike chepụtara n'ime gabions igbe - otu n'ime ndị kasị ewu ewu waya ngwaahịa maka iju mmiri akara. Mgbe nkume na-etinye n'ime ya. Ịtọ nke gabions ka a mgbidi ma ọ bụ akụ megide mmiri na iju mmiri. Hexagonal waya netting na-welded n'ime okuko netting maka ozuzu nke ọkụkọ na ndị ọzọ na ọkụkọ. Popularly eji dị fences mgbe green ntekwasa, na-akwụ ụgwọ nwere ike belata. N'oge gara aga afọ, na hexagonal waya netting mere nke galvanized ígwè waya e ji mee na fences, ozuzu na-ewu mkwado.
Dị ka ngwa , anyị nwere ike na-enye waya netting na-eso ụdị:
General Purpose Waya netting;
Arọ Type Waya netting;
Waya netting maka fences.
Hexagonal oghere kpara waya netting na-akasị ji dị ka ìhè fencing maka okuko, ugbo, maka nnụnụ, òké bekee Pita enclosures, osisi nche na ubi fencing, nchekwa bins na ji achọ akwado tennis n'ụlọikpe. Ọ na-eji dị ka waya ntupu akwa ìhè mkwado na egbugbu àmà iko na simenti ihe, plasta na-ebikwasị nke okporo ụzọ, wdg
nhazi Types dị na-agụnye:
• ogologo ighikota hexagonal waya netting
• laa azu ighikota hexagonal waya netting
• abụọ-direction gbagọrọ hexagonal waya netting
Risịrị nke hexagonal Waya netting nwere ike ịbụ:
• kpaliri mgbe ịkpa ákwà, kpaliri tupu ịkpa ákwà,
• ịkwanyere ntekwasa galvanized
• ọkụ-tinye galvanized
• electro kpaliri
General nkọwapụta nke hexagonal Waya netting
Previous: Square waya ntupu
Osote: Chain Link ngere
Galvanized hexagonal waya ntupu
Ịkwanyere ntekwasa hexagonal waya ntupu
Waya ntupu mpempe akwụkwọ
Staninless Steel welded waya ntupu
Ịkwanyere ntekwasa Waya